Chii chakaitika kune akakurumbira vhidhiyo mutambo Pingus? | Linux Vakapindwa muropa
Imi mose muchayeuka mutambo unonakidza Pingus yeLinux, uye ndine chokwadi chekuti vazhinji venyu muchiri kutamba mutambo mudiki mune ino classic. Kune vatsva, taura kuti mutambo wakasununguka unobva pane inozivikanwa mutambo weLimmings uye kuti yakaburitswa pasi peGNU GPL rezinesi. Iyo inowanikwa kune akasiyana mapuratifomu kunze kweLinux, senge Mac neWindows. Kunyangwe nehunhu hwehunhu hwemutambo, unonakidza uye muropa.
Mutambo uyu wakatanga mukupera kwa1998, uye kubvira ipapo wakashanduka nekufamba kwenguva. Kana iwe uchida rumwe ruzivo, unogona kubvunza iyo webhusaiti yepamutemo yeprojekti. Simba rayo raive rakaenzana neiyo Lemmings, chete kuti ivo protagonists idiki penguin. Izvi zviri kubva kubva pakubuda uye rako basa ndere kuatamisa iwo akananga kune kubuda, kana iwe uchikwanisa kusvika pazvinodiwa zvepenguin zvakachengetedzwa iwe uchakwanisa kupfuudza iyo skrini uye kumberi pane iyo huru mepu kune imwe. Kune izvi iwe unenge uine akateedzana ezvekushandisa kana hunhu hweaya mapenguin aunofanirwa kubata nemazvo.
Many distros aisanganisira iyo Pingus package pakati pemapakeji avo ayo anosanganisirwa nekusarongeka neiyo system yekuisirwa, nePingus ichioneka pakati pemitambo iripo. Parizvino hazvichisiri izvo, uye vazhinji vachashamisika chii chakaitika kumutambo wakakurumbiraZvakanaka, uchitarisa kune yayo yepamutemo webhusaiti, zvinoita sekunge yakati kusiyiwa. Huye, yazvino vhezheni iripo yemutambo ndiPingus 0.7.6, iyo yakaburitswa muna Zvita 2011 uye kubvira ipapo basa diki raitwa pachirongwa ichi, kunze kwekuchinjisa kuMac uye zvimwe zvekuvandudzwa kweApple system.
Zvakare munaKurume 2015 yakafambisa iyo Pingus kodhi kune peji re GitHub kwaunogona kurodhaunira kana kana uchida, gadzira forogo yaro, batsira, nezvimwe. Ikoko zvinoita sekunge kune chimwe chiitiko, kubva kwekupedzisira chisungo (shandura mune yayo kodhi kana mafaera) ayo anoonekwa mazuva kubva kumwedzi mina yapfuura. Asi sekutaura kwangu, kuita kushoma. Asi izvo hazvireve kuti hazviwanikwe, saka kunyangwe uchizviziva kana kuti kwete, ndinokukurudzira kubva kuLxA kuti ununure uye unakirwe zvekare ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chii chakaitika kune akakurumbira vhidhiyo mutambo Pingus?
Ndiri kuda kuyedza asi haina kupinda .DEB. Tinya kuumbiridza.
Firefox 54 inosunungurwa zviri pamutemo